फिलिपिन्ससँगको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, को को परे टिममा ? - Seto Khabar फिलिपिन्ससँगको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, को को परे टिममा ? - Seto Khabar
फिलिपिन्ससँगको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, को को परे टिममा ?
November 13, 2017 सेतो खबर
काठमाडौं, कात्तिक २७ । एएफसी एसियन कप छनोट अन्तर्गत फिलिपिन्ससँग खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले सोमबार फिलिपिन्सविरुद्धको खेलको लागी अनिल गुरुङको कप्तानीमा २३ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो।
पहिलो लिग खेल फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा ४–१ ले पराजित भएको नेपालले फिलिपिन्ससँग मंगलबार घरेलु मैदानमा दोस्रो लिग खेल खेल्दैछ । नेपाल र फिलिपिन्सबीचको खेल सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा मंगलबार अपराह्न हुनेछ ।
चोटका कारण देवेन्द्र तामाङ र आदित्य चौधरी टिममा परेका छैनन् । खेलमा अनिल गुरुङ र जगजित श्रेष्ठ फर्केका छन्।
एसियन कप छनौटको समूह ‘एफ’ मा रहेको नेपाल चार खेलमा ३ खेलमा हार र १ खेलमा बराबरी गरी १ अंकसहित तालिकाको पुछारमा छ । फिलिपिन्सको ४ खेलबाट २ खेलमा जित र दुई खेलमा बराबरी खेल्दै ८ अंकसहित समुहको शिर्ष स्थानमा छ । ४ खेलबाट एक खेलमा जित र ३ खेलमा बराबरी खेल्दै ६ अंकसहित यमन दोस्रो स्थानमा छ । तेस्रो स्थानमा रहेको ताजिकिस्तानको ४ खेलबाट २ खेलमा जित र २ खेलमा हारसहित ६ अंक बटुलेर तेस्रो स्थानमा छ ।
जर्ज प्रिन्स कार्की
आर्इपीएल २०१९ को लागी पनि दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दीप लामिछाने नै रोज्यो
एशियाली छनोटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्कदै
मेसीले २ गोल गरेपनि बार्सिलोना रियल बेटिससँग पराजित